पुरुषको मुखबाट के सुन्न चाहन्छन् महिला ? « Deshko News
पुरुषको मुखबाट के सुन्न चाहन्छन् महिला ?
यी हुन् महिलाले सुन्न चाहने १० चिज
यदि कुनै महिलाई आकर्षित गर्न वा खुसी राख्न राहनु हुन्छ भने धेरै केही गर्नु पर्दैन सामान्य बोलीचालीमा उनीहरुलाई मन पर्ने कुरा गरिदिए पुग्छ । तपाइँलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर यो सत्य कुरा हो ।
पुरुषले जहिले पनि महिलालाई मन पर्ने तीन कुरा मनमा राखि रहनु पर्छ । सबै महिलालाई मन पर्ने खाना, दराजमा नयाँ नयाँ कपडा र पुरुषहरुले आफ्नो सुन्दरताको बयान गरेको मन पर्छ ।
महिलाई तिमी राम्री छौ भन्दिँदा जित खुसी अरु केही गर्दा नि लाग्दैन । कुनै पुरुषले तिमीलाई यो कपडा राम्रो देखिएको छ भन्यो भने मख्ख पर्छन् । ३० वर्षकी महिला पनि यो उमेरमा पनि कस्तो सेक्सी देखिएको भन्दा फुरुक्क पर्ने हुन्छन् ।
‘तिमी मेरो पहिलो प्रेम हो’
‘तिमी असल आमा बन्न सक्छौ’
‘तिमी मेरी सबैभन्दा नजिकको साथी हो’